Taiwan: misy ny « festival » momba ny « film » mikasika ny foko | NewsMada
Taiwan: misy ny « festival » momba ny « film » mikasika ny foko
Azo lazaina ho miavaka amin’ny maro ary tsy fahita ity hetsika manodidina ny sarimihetsika, tanterahina nanomboka ny taona 2001 any Taiwan, ity. Tsy inona izany fa « festival » miompana tanteraka amin’ireo horonantsary mikasika ny foko, antsoina koa hoe Tief. Tsy vao izao akory ny hetsika, satria efa andiany faha-10 ny tanterahina amin’ity taona ity.
Iraisam-pirenena ny Tief ary asongadina ao anatin’izany ireo voka-pikarohana sy fanadihadiana nataon’ny manampahaizana momba ny foko na ireo « anthropologues », avy amin’ny firenen-tsamihafa. Nohamafisin’ny mpikarakara anefa fa tsy ho voafehin’izany fotsiny ireo « films » halefa mandritra ny Tief.
Hanana ny fotoana natokana ho azy koa ireo horonantsary notontosain’ny matihanina ary manome lanja olona iray izay mitazona sy mitahiry ny fototra niaviany (fomba amam-panao, kolontsaina, sns). Tanjon’ny Tief ny hanome voninahitra ny fiombonana sy ny hanome lanja ireo kolontsaina any ambany ravinkazo any.
Iraisam-pirenena ity « festival » ity, izany hoe misokatra ho an’ny mpanatontosa sarimihetsika sy ireo mpanao fikarohana teratany malagasy. Sehatra toy itony no anisan’ny ahafahana mampahafantatra ny maha izy azy ny firenena iray, toa an’i Madagasikara, izay ahitana foko 18.